Erdogan oo dhex-dhexaadinaya Ruushka iyo Ukraine
Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan ayaa khadka taleefoonka kula hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin Khamiistii, si uu u martigeliyo isaga iyo hoggaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy ayna wadahadal toos ah u yeeshaan, sida laga soo xigtay xafiiskiisa.
War-saxaafadeedka kasoo baxay madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sheegay in Erdogan uu Putin u sheegay in heshiis laga gaaro arrimaha qaar uu u baahan karo kulan dhexmara madaxda labada dal. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in xabbad-joojin iyo xal waara ay wadahadalladani u horseedi karaan labada dal, sida agu xusay bayaanka Turkey.
Dhinaca kale, weerarrada Ruushka ayaa ka socda magaalooyin dhowr ah, iyada oo gantaalaha Ruushka Jimcaha maanta ah lagu garaacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine sida uu sheega duqa magaaladaas Andriy Sadovy.
Ma jirto warbixin rasmi ah oo laga soo saaray weerarradii maanta, hase yeeshee Tv-ga Ukraine 24 ayaa sheegay in ugu yaraan saddex qarax laga maqlayay gudaha magaalada Lviv.
Madaxweyne Joe Biden, oo Putin ku tilmaamay "kaligii taliye gacan-ku-dhiigle ah", ayaa u caddayn doona madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping maanta in Shiinuhu "uu qaadi doono mas'uuliyadda tallaabo kasta oo ay ku taageerto gardarrada Ruushka," sida ay uu xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken u sheegay suxufiyiinta.
Dalalka Japan iyo Australia ayaa iyaguna maanta cunaqabatayn horleh kusoo rogay Ruushka, kuwaas oo ku ciqaabaya duullaankii ay ku qaadeen dalka Ukraine.